बाढीको कहर : अनिदोमै बित्यो पहिलो रात ! | Himalaya Post
बाढीको कहर : अनिदोमै बित्यो पहिलो रात !
Posted by Himalaya Post | २९ असार २०७५, शुक्रबार १६:५३ |
भक्तपुर– हनुमन्ते खोला पसेर बितण्डा मच्चाएको बस्तीका बासिन्दाको रात अनिदोमै बितेको छ ।
मध्यपुरथिमि राधेराधे बस्ने शर्मिला पाठकले रात अनिदोमै बितेको बताइन् । भाडामा बस्दै आएको उनका परिवारका चारैजनाको रात नसुतिकनै बित्यो । उनले भनिन्, “दिउँसो बाढी घटे पनि कोठाभित्र पसेको पानी घटेन । कोठामा चार फिटमाथिसम्म पानी भरिएको छ । एक्लैले पानी झिक्न सकिँदैन, ओछ्यान, लुगा, खानेकुरा सबै डुब्यो । के खाने, कहाँ सुत्ने पत्तो छैन ।”
यहाँका बस्तीमा भुइँतलामा भाडामा बस्नेहरुको बिचल्ली भएको छ । सँगैका अशोक थापाले भने, “खानेपानीसमेत छैन, पानी ट्याङ्करले पानी वितरण गर्न आएपछि एक भाँडो पानी थापेर राख्यौँ । यहाँ धेरैको यस्तै बिचल्ली छ । कोठामा छिरेको पानी झिक्न नगरपालिकाले पानी तान्ने पम्पको व्यवस्था गरिदिए धेरैको उद्धार हुने थियो ।”
निजी पानी तान्ने पम्प हुनेहरुले आज पानी तानेर बाहिर फ्याँके पनि पम्प नभएका धेरैको घरभित्रको पानी दह बनेर बसेको छ । कमेरोटार भाटभटेनी पछाडि तीनतले घरको भुइँतलामा भाडामा बस्दै आएकी सिर्जना श्रेष्ठले भनिन्, “कोठामा पानीसँगै पसेको माटो, हिलो दुई फिटसम्म जमेको छ, भित्र जानेसम्म अवस्था छैन । सुत्ने त कहाँ कहाँ ? सबै एकै ठाउँमा कोचिएर अनिदोमै रात बिताइयो ।”
मध्यपुरथिमि नगरपालिकाको पहलमा खानेपानी मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार मध्यपुर थिमिको डुबान क्षेत्रमा आजदेखि खानेपानी वितरण शुरु भएको छ । मध्यपुरथिमिको टोल टोलमा १८ वटा ट्याङ्करबाट खानेपानी वितरण शुरु गरिएको नगरपालिकाका प्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठले जानकारी दिए । भक्तपुरमा पनि खानेपानी वितरण शुरु भएको छ ।
अविरल वर्षाका कारण आएको पहिरोमा तीन सदस्य गुमाएको पीडित परिवारलाई राहत रकम प्रदान गरिएको छ । चाँगुनारायण नगरपालिका–७ मझुवा गाउँका ७० वर्षीया हीरा लामा, पत्नी ६५ वर्षीया पानमाया लामा र दुई वर्ष छ महिनाकी नातिनी सम्पदा लामाको मृत्यु भएको थियो । जिल्ला दैवी उद्धार समितिले आज पीडित परिवारलाई रकम हस्तान्तरण गरेको हो । मानवीय आस्था नेपाल र नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले आजदेखि राहत रकम वितरण गर्न थालेको छ । रमेश गिरी /रासस
Previousकान्तिपुरको प्रधान सम्पादकमा नारायण वाग्ले
Nextदेशभर यसरी मनाइयो २०५ औँ भानुजयन्ती (फोटोफिचर)
पानी छोएको निहुँमा कुटपिट गर्ने अव जेलमा
२८ असार २०७५, बिहीबार ०७:४६
महरालाई थप ३ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान
२८ आश्विन २०७६, मंगलवार २०:२८
खप्तड गोल्डकप: उदघाटन खेलमा आयोजक सुदूरपश्चिमसँग काँकडभिट्टा भिड्दै
२४ पुष २०७५, मंगलवार ०८:०२
साना हतियारको जगजगीः प्रहरीका अनुसार–आधा लाखसम्म पर्ने रिभल्वर काठमाडौंमा सजिलै पाइन्छ
८ कार्तिक २०७४, बुधबार ०४:१८